यी अभागी आमा जस्ले दशैको मुखमा आफ्ना २ छोरीलाई गुमाईन ! – Online Khabar 24
यी अभागी आमा जस्ले दशैको मुखमा आफ्ना २ छोरीलाई गुमाईन !
काठमाडौ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २४ वर्षीया सुजा चौधरी बिएससी नर्सिङ चौथो वर्षमा अध्यनरत थिइन्।
उनकी बहिनी २० वर्षीया लिजा पनि कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा बिडिएस पढ्दै थिइन्। घान्द्रुक दुर्घटनामा उनीहरू दिदीबहिनी नै परे।
होनाहार दुई छोरीले कोख रित्तो बनाएर गएपछि बाबुराम र पार्वतीले अस्प्तालमा आफुलाई सम्हाल्न सकेनन् । २४ वर्षीया सुजा र २० वर्षीया लिजाका बुबाआमा बाबुराम र पार्वती चौधरी हुन् । दिल्लीमा एक महिना बसेर असोज १९ मा पार्वती काठमाडौं फर्किएकी थिइन्। उनलाई क्या न्स र देखिएपछि छोरीहरूले निकै भरोसा दिन्थे ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको दुई छोरीको शव देखेपछि बाबुरामले श्रीमतीलाई सम्झाउन सकेनन्। पार्वती अचेत जस्तै भइन्।
‘दुईवटै छोरी जन्मिँदा मेरो कोख दुखेन,’ अस्पताल परिसरमा चि च्या उँदै उनले भनिन्, ‘अहिले मेरो शरीर सबै छि या छि या भएको छ।’ दुई छोरीले नै बुबा र आमालाई झ ग डा नगर्न प्रतिज्ञा गर्न भन्थे।
पार्वतीले मान्ने थिइनन्। बरु झ ग डा गरेन भने घर चल्दैन भन्थिन्। उनले नयाँ फोन किन्दिन छोरीसँग गरेको वाचा सम्झिइन। भनिन्, ‘आऊ छोरी अब म प्रमिस गर्छु, बुबासँग कहिल्यै डि स्क स गर्दिनँ।’
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य र प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापा घटनास्थल पुगेर मृतकहरुको पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा पठाएका छन्। दुर्घटनामा घाइते २० वर्षीया देविका घिसिङलाई उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ। उनी भीरमा अड्किएर बाँचेकी हुन्। उनको नाक र बायाँ हातमा चोट छ। उनी काठमाडौं ३ गोंगबुकी बासिन्दा हुन्। यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevहराएका बालक ८ महिना पछि भारतमा फेला परे, पहिलो पटक छोरालाई देख्दा यसरी डाको छोडेर रोइन् आमा !
nextमलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु !